inona no mety hampihena ny induction? ny induction dia mihena ny peratra sy peratra mety aminy
Home / Applications / Hira fisaorana / inona no mety mihena induction
Sokajy: Hira fisaorana Tags: mividiana heater mety hampihena, rafitra fanamorana ny induction, Induction shrink fitify, miteraka hafanana famindrampo, Mitadiava fihenam-bidy, mihena ny kodiarana fametahana, mihena ny girza mety, Afangaro ny fihetsika, Hetezo ny vatan-kazo mety tsara, inona no mety mihena induction
Inona no atao hoe mihena ny induction?
Induction shrink fitify dia fandidiana tsotra misy ifanaovana na fanitarana ny singa iray amin'ny iray hafa hiteraka fitsabahana sy fampivoarana ny tsindry, mitazona ireo singa roa miaraka amin'ny mekanika.
Ny fomba tsirairay amin'ny fiarovana ny ampahany amin'ny fivoriambe dia manana tombony miavaka. Raha toa ka mihena ny fihenan-tsika dia azo angonina ny ampahany vita amin'ny vy: vy amin'ny vy, vy amin'ny varahina, aliminioma amin'ny vy, manezioma mankany vy, sns. Matetika, ny mari-pana tafiditra amin'ny fanafanana ho fanitarana dia ambany kokoa mba hisorohana ny fiovana rafitra metallurgical toy ny amin'ny famaohana na ny fiempo. Noho ny mety hisian'ny fifantohan'ny fihenjanana, ny fiantraikan'ny fametahana ny fihenan-tsakafo dia tokony hojerena amin'ny fivorian'ny krizy.
Amin'ny fampiharana, ny fandidiana dia tsotra, mitaky fanomanana farafahakeliny ny habakabaka, fifehezana kely ary tsy fanadiovana aorian'ny fivoriambe matetika. Satria ny hery fiarovana dia mekanika, tsy manelingelina ny fitrandrahana oksizenina na fandotoana, manalavitra ny filana fampiasana flux. Ny ampahany mivondrona amin'ny fihenan-tsofina dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny singa ivelany. Ity fomba ity dia mety indrindra amin'ny fanamafisana induction miaraka amin'ny tahan'ny hafanana haingana sy ny fahamendrehana, mamela ny fanoloana ireo faritra efa tonta na fanitsiana ny fampifanarahana.
Fanamorana ny induction matetika manolotra tombony miavaka amin'ny fametahana. Ny fanamainana dia azo atao an-toerana, manome fanitarana ampy eo an-toerana ho an'ny fitetezana kely nefa tsy manafana fanariana lehibe na milina tsara, mampihena ny fanodikodinana. Ity fanafanana haingam-pandeha sy mifantina ity koa dia manamora ny famoahana ireo singa mihena mihena toy ny voalaza etsy ambony. Ho fanampin'izany, ny fanafanana fampidirana dia manome dingana tsy misy pentina, haingana ary azo averina azo ampidirina amin'ny famokarana ho an'ny fikirakirana faran'izay kely sy automatique mora.
HLQ rafitra fanamorana ny induction dia ampiasaina amin'ny indostria mandeha amin'ny fiara mba hampihena ny peratra sy peratra mety. Izy ireo koa dia ampiasaina hanamboarana fiaramanidina, lamasinina ary kamio. Ny rafi-finday dia ampiasaina amin'ny fampihenana ireo asa mety amin'ny sehatra amoron-tsiraka ary mihombo hampiasaina hanalana ireo voanjo goavambe sy bolt ao amin'ny turbines-n'ny herinaratra.
Matetika, ny metaly dia hitatra ho setrin'ny fanafanana sy ny fifanarahana rehefa mangatsiaka. Ity valiny dimensional amin'ny fiovan'ny mari-pana ity dia fantatra amin'ny hoe fanitarana hafanana. Ny fampidinana an-tsokosoko induction dia izay ampiasantsika an'io vokatra io mba hanamorana na hanesorana ampahany. Ny singa metaly iray dia hafanaina eo anelanelan'ny 150 ° C sy 300 ° C izay mahatonga azy io hanitatra sy hahafahana mampiditra na manaisotra singa hafa. Rehefa, ohatra, ny mampira ny fantsona roa amin'ny fantsona dia hafanaina ny ampahany iray mandra-pivelatra ny savaivony mba hampidirina amin'ilay ampahany hafa. Rehefa miverina amin'ny maripana manodidina ireo faritra mifampitohy dia manjary tery sy matanjaka ilay fiarahana - 'mihena mihintsy'. Toy izany koa, ny fanitarana hafanana dia azo ampiasaina hamaha ny fiaraha-miasa alohan'ny famongorana.
Ny fifehezana ny fizotrany, ny tsy fitoviana, ny fahamendrehana ary ny hafainganana dia tombony lehibe azo avy amin'ny fametahana fidirana. Ny fandefasana hafanana induction dia tena marina. Noho ny hafanana ateraky ny singa dia manafana ilay ampahany tianao hafanaina fotsiny ianao fa tsy ny atmosfera manodidina azy. Ary koa ny fampihenana ny mety ateraky ny fihary atodinaina, mahomby amin'ny angovo izany. Ankoatr'izay, satria ny induction dia mamokatra hafanana tsy miovaova, dia matetika no mamela hafanana kely kokoa hampiasaina. Ny fifehezana ny mari-pana dia marina miaraka amin'ny fanaraha-maso marina ny fotoanan'ny fitomboana sy ny mari-pana hitazona. Tsy toy ny fomba fanafanana nentim-paharazana, ny fampidirana dia tsy misy lelafo mitanjaka. Io dia mamela ny fihenan-tsofina fampidirana hampiasaina amin'ny karazana fampiharana amin'ny tontolo mikorontana, indrindra amin'ny fampiharana petrochemical.
Indostria sy fampiharana isan-karazany dia afaka mahazo tombony amin'ny fampidinana an-tsokosoko. Ny rafi-pampananaranay fampidirana dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiara mba hampihena ny fitaovana, peratra ary peratra. Izy ireo dia miasa amin'ny indostrian'ny mekanika ary koa amin'ny fikolokoloana ny fiaramanidina sy lamasinina. Ny rafi-finday dia ampiasaina amin'ny fampihenana ny asa mety amin'ny sambo sy ny lampihazo ary ampiasana hampiasaina ary hanala ireo voanjo goavambe sy bolt ao amin'ny turbines-n'ny herinaratra ary koa ny bearings sy ny shaft an'ny mpamokatra herinaratra.
Ny teknika fampidinana mihena induction dia matetika ampiasaina amin'ireto dingana manaraka ireto:
• Mipetaka amin'ny kodiarana fitaovam-piadiana (paingotra amin'ny zoro, sns.)
• Fonon-tsiranoka ho an'ny compresseur an'ny vata fampangatsiahana
• Tapis Morse ho an'ny fitaovana milina
• Ny faritra mihodina ho an'ny turbine.
Nihaona tamin'ny antsipirian'ny karazana segondra mandroso ara-teknolojia amin'ny indostrian'ny aerospace miaraka amin'ny fizotrany manome antoka i Fives induction shrink fitify mazava tsara ary aza mandoto ny velarana anatiny, indrindra rehefa manangona faritra marefo.